10 amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra any Eropa | Vaovao momba ny dia
Rehefa avy nahita ny sasany lapa tsara tarehy indrindra any Espana, fa tsy isika rehetra, mikasika anay mitady eo amin'ireo tsara tarehy indrindra any Eropa, kaontinanta misy tantara marobe izay mbola itehirizana ireo trano mimanda mahatalanjona sy trano fonenan'andriana. Ny sasany fantatra tsara, ny hafa tsy dia be mpahalala, fa ny tsirairay amin'izy ireo dia manana zavatra betsaka holazaina.
Na dia tianay ny hanangona ireo heverinay ho tsara tarehy na mampiavaka azy kokoaMarina fa mety misy ny mino fa misy ny tsy eo. Ity dia lisitry ny lapa folo, amin'ireo an-jatony izay tsy maintsy manerana an'i Eropa, ka raha fantatrao fa tsara kokoa ianao dia aza misalasala milaza azy ireo. Vonona handentika ny tenanao ao amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra?
1 1-Castle Neuschwanstein, Alemana
2 2-Prague Castle, Repoblika Tseky
3 3-Castle Edinburgh, Ekosy
4 4-Castelo da Pena, Sintra, Portugal
5 5-Bran Castle, Romania
6 6-Chillon Castle, Soisa
7 7-Tranon'i Eilean Donan, Ekosy
8 Lapan'i 8-Chenonceau, Frantsa
9 Castle 9-Hohenwerfen, Austria
10 10-Lichtenstein Castle, Alemana
1-Castle Neuschwanstein, Alemana
Ity trano mimanda ity dia any Bavaria, ary iray amin'ireo Trano eropeana malaza indrindra. Ny fomba neo-Gothic tamin'ny taonjato faha-360 dia miavaka amin'ny fitiavany tantaram-pitiavana. I Louis II avy any Bavaria no nandidy ny fananganana an'ity lapa ity ho fonenana, ary noho ny fahatanorany dia voatahiry amin'ny toerana lavorary izy io. Ny trano mimanda izay nanome aingam-panahy an'i Walt Disney mba hanao ny an'ny Sleeping Beauty, noho izany dia ho mahazatra azy ny silhouette. Ho fanampin'izay, manana ny mampiavaka azy izy fa manana efitrano 14, fa ny XNUMX amin'izy ireo ihany no manana endrika vita.
2-Prague Castle, Repoblika Tseky
Izany no lapa gothika lehibe indrindra eto an-tany, ary koa ny trano mimanda medieval lehibe indrindra, izay no antony nanasongadinana azy tao amin'ny boky firaketana an'i Guinness. Naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io, ary onenan'ny mpanjaka sy filoham-pirenena. Androany dia toeram-pizahantany sarobidy indrindra, izay misy aza ny filalaovana. Ao anatiny no misy ny katedraly, ny tranonkalan'i San Jorge, ny basilikan'i San Jorge, ny Royal Palace ary tranombakoka maromaro, ka mila fotoana hitsidihana azy rehetra.
3-Castle Edinburgh, Ekosy
Efa antitra ity trano mimanda miorina amin'ny vatolampy volkano, ao afovoan-tanànan'i Edinburgh. Misokatra ho an'ny mpitsidika izy io, ary misy fampirantiana sy tranombakoka ao anatiny. Ny ampahany tranainy indrindra dia voatahiry dia ny Chapel St. Margaret an'ny taonjato faha-XNUMX. Avy amin'ity lapa ity dia azonao atao ihany koa ny mankasitraka ny fomba fijery mahafinaritra ny tanàna sy ny manodidina azy noho ny toerana misy azy.
4-Castelo da Pena, Sintra, Portugal
Ity Castillo de la Peña ity dia iray amin'ireo tena mampiavaka sy tena izy izay ho hitantsika. Iray amin'ireo trano itoeran'ny fianakavian'ny mpanjaka Portiogey nandritra ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia natsangana tamin'ny endrika tantaram-pitiavana, fa ao anatin'izany ny endrika hafa izay manome azy fikitika ivelany sy manokana, toy ny neo-Gothic na neo-Islam. Ao anatiny dia azonao atao koa ny mahita ny zaridaina anglisy eo akaikin'ny lapa. Raha misy zavatra hiavaka io lapa ho an'ny mazava loko, izay mahatonga azy ho sambatra indrindra amin'ny rehetra.
5-Bran Castle, Romania
Ity dia Trano mimanda taloha izay hita eo amin'ny sisin-tany manelanelana an'i Tranifornia sy Wallachia. Trano mahafinaritra izy io izay misy tranombakoka misy zavakanto medieval tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary iray amin'ireo lapa Gothic mahavariana indrindra. Na izany aza, ny tena nahomby tamin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany dia ny fifandraisany amin'ilay boky nosoratan'i Bram Stoker, 'Dracula', izany no antony iantsoan'ny maro azy io ho tranon'ny Dracula, na dia toetra foronina aza.
6-Chillon Castle, Soisa
Eo amoron'ny Farihin'i Genève no misy an'io trano mimanda mahafinaritra io. Ny fototra iorenany dia miorina amin'ny trano mimanda hatramin'ny vanim-potoana varahina, satria stratejika ity toerana ity ary nonina nandritra ny taonjato maro. Izy io dia tranon'ny tranon'ny mpanjaka, ary koa toerana fandalovana sy fomba amam-panao, ary ankehitriny dia faritra fizahan-tany manana hatsarana lehibe, miorina amin'ny nosy be vato. Ao anatiny dia afaka mahita sary hosodoko vita amin'ny taonjato faha-XNUMX sy valizy ambanin'ny tany ianao.
7-Tranon'i Eilean Donan, Ekosy
Trano kely somary kely ity raha oharina amin'ny hafa efa hitantsika, saingy efa fantany tsara, ary ambonin'izany rehetra izany dia tsara tarehy noho ny tontolo misy azy io. Amin'ny kely nosy any Lake Lake, mahatratra ny tany amin'ny alàlan'ny tetezana vato taloha. Fananganana izay naverina tamin'ny laoniny tamin'ny taonjato faharoa-polo tamin'ny fianakavian'i MacRae, ary niseho tamin'ny sarimihetsika malaza toy ny 'Braveheart' na 'The immortals'.
Lapan'i 8-Chenonceau, Frantsa
Any amin'ny Loire Valley, toerana mety hahitanao lapa tsara tarehy. Amin'ireo fanamafisana medieval, ny Torre de los Marques sisa no tavela, ny ambiny dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX, natsangana tamin'ny fomba palatialy. Fantatra amin'ny anarana hoe 'Castle of women' ireo vehivavy malaza izay nampiasa azy io ho fonenana, toa an'i Diana de Poitiers na Catherine de Medici.
Castle 9-Hohenwerfen, Austria
Ity lapa ity dia miavaka noho izy eo an-tampon'ny tendrombohitra, amin'ny toerana toa tsy zaka. Toy izany ny fitokanan'izy ireo nogadraina. Ny niandohany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, noforonina mba hiarovana ity faritra Alpes ity. Androany dia azonao atao ny mitsidika ny atiny, na dia mahita ny efitrano fampijaliana, ny Tranombakoka Puppet, fivarotana na tranombarotra medieval.
10-Lichtenstein Castle, Alemana
Akaikin'i Stuttgart io, mipetraka eo ambonin'ny vatolampy, ka toa mandanjalanja izany. Dia a fananganana neo-gothic, izay namboarina tamin'ny sisan'ny trano mimanda antitra. Misongadina amin'ny hatsaran-tarehiny sy ny fiarovana azy io tsara izy, ankoatra ny toerana mahavariana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » 10 amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra any Eropa
Tsidiho ireo tendrombohitra mahavariana indrindra eto an-tany